घुमाइफिराइ ‘ताजा जनादेश’ - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७८, मंगलबार ६ : ४७
काठमाडौं । धेरैलाई चासो छ– राजनीति अब कता जान्छ ? एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सेरोफेरो घुमेको राजनीतिको भविष्य धेरै हदसम्म उनकै निर्णयमा निर्भर छ । र, जिज्ञासा राख्नेहरूको प्रश्न यो पनि छ– प्रधानमन्त्रीले के गर्लान् ?
एमाले महाधिवेशन आयोजक समितिको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ‘ताजा जनादेशमा तयार रहन’ कार्यकर्तालाई निर्देश गरे । उनको राजनीतिक प्रतिवेदन ‘चुनाव तयारीको दस्तावेज’सरह थियो।
‘प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचना सरकारलाई असहयोग गर्न र यसलाई सहज ढंगले चल्न नदिन पर्याप्त छ । तर, वैकल्पिक सरकार दिन र देश र जनताको हितमा काम गर्न दिन प्रतिनिधिसभा सक्षम देखिएको छैन । यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु उचित हुँदैन’, अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस्तो विरोधाभासको विकल्प दुईवटा मात्रै हुन सक्छन्– कि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका बीचमा नीतिमा आधारित दिगो समीकरण बनाउने र संसद्लाई सहज ढंगले चलाउने कि त ताजा जनादेशका लागि अगाडि बढ्ने ।’
प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा समीकरणको सम्भावना क्षीण छ । अर्थात्, चुनावकै सम्भावना बलियो छ ।
‘वर्तमानमा एमालेलाई बाहिर राखेर बन्ने समीकरण दिगो हुने सम्भावना छैन । त्यसले केही व्यक्तिका सत्ता आकांक्षा पूरा गर्नेबाहेक देश र जनताको पक्षमा सकारात्मक योगदान दिने सम्भावना त झनै छैन । तत्काल नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा अर्को कुनै राजनीतिक दल सहभागी भएर दिगो राजनीतिक निकास खोज्ने सम्भावना पनि बलियो देखिएको छैन’, ओलीले भनेका छन् ।
सही विचार, सही धार र नेतृत्वलाई समाप्त पार्ने योजनाअनुरुप प्रतिक्रियावादीसँगको साँठगाँठमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र अन्य संस्था उल्ट्याउने कोसिस भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसलाई श्रमजीवी वर्गको सरकार ढलाएर बुर्जुवा वर्गलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको षडयन्त्रका रूपमा लिइएको छ । पार्टीको काम केन्द्रबिन्दु सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धि भएको अध्यक्षको प्रतिवेदनमा छ । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनका साथै सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । १० गते पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगन भएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
कुण्ठाग्रस्त, व्यक्तिविरोधमा केन्द्रित, सत्तास्वार्थले निर्देशित र पार्टीलाई विभाजन गर्दै सतहमा माओवादी केन्द्रलाई र सारमा कम्युनिस्टविरोधी शक्तिहरूलाई बल पु¥याउने यस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुँदैनन् । यस्ता प्रवृत्तिको खण्डन, आलोचना र विरोध गर्दै अलमलमा पर्नुभएका साथीहरूलाई पार्टीको मूलधारमा एकताबद्ध गर्न सचेतन प्रयास गरिनुपर्छ । यस्ता विभाजनकारी गतिविधिमा संलग्न मुख्य नेताहरूलाई कारबाही गरेर पार्टीले यसको स्पष्ट संकेत पनि गरिसकेको छ ।’